IGosa Lonxibelelwano laseZambia kwi-UNWTO izisa amava kwiBhodi yoKhenketho yase-Afrika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » IGosa Lonxibelelwano laseZambia kwi-UNWTO izisa amava kwiBhodi yoKhenketho yase-Afrika
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • abantu • Cinezela iZaziso • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseZambia eziQhekezayo
UGqirha Ngwira Mabvuto Percy, Unobhala Wokuqala Wezokhenketho kunye neGosa Lonxibelelwano laseZambia kwi-UNWTO, uhleli kwiBhodi yezoKhenketho yase-Afrika (i-ATB), esebenza njengelungu leKomiti eLawulayo.
Amalungu ebhodi amatsha ajoyine umbutho ngaphambi kokumiliselwa kwe-ATB ethambileyo ngoMvulo, nge-5 kaNovemba, kwiiyure ezili-1400 ngexesha leMarike yoKhenketho yeHlabathi eLondon.
I-200 yeenkokheli eziphambili zokhenketho, kubandakanya abaphathiswa abavela kumazwe amaninzi ase-Afrika, kunye noGqirha Taleb Rifai, owayesakuba nguNobhala Jikelele we-UNWTO, bacwangciselwe ukuya kulo msitho e-WTM.
Cofa apha ukufumana okungakumbi malunga nentlanganiso yeBhodi yezoKhenketho ye-Afrika ngomhla we-5 kweyeNkanga kunye nokubhalisa.
UGqirha Ngwira Mabvuto Percy sisicaka sikarhulumente esinamava, unozakuzaku, oqeqeshiweyo kwaye onamava kwezokhenketho. Uneminyaka engaphezulu kwe-15 yamava omsebenzi kwicandelo lokhenketho kwaye nangaphezulu kweminyaka emi-5 kubudlelwane bezopolitiko nakwamanye amazwe. Amava akhe obuchule kunye nophuhliso lomsebenzi omabini kwinqanaba lasekhaya nakwamanye amazwe.
Ngobomi bakhe bobungcali kunye nobomi kule minyaka idlulileyo, uGqirha Ngwira ubeyiNgcali kwezokhenketho, iDiplomat, uMcebisi, uMhlohli kunye noMcebisi ophambili kubaPhathiswa bezoKhenketho, kunye namanye amaGosa kaRhulumente aPhezulu kwimiba yezokhenketho, ubudlelwane bamanye amazwe, ubuchule kunye nemicimbi ye-UNWTO . Isifundiswa esinezifundo ezipapashiweyo esizenzela igama laso uGqirha Ngwira unesidanga se-PhD kuLawulo loKhenketho (eSpain), iMA kwiDiplomatic Studies (e-United Kingdom), kwi-MSc. kuPhuhliso lwaMaphandle lwaMazwe ngaMazwe ngokukhethekileyo kuLawulo lwezoKhenketho (e-United Kingdom), i-BA kwiHotele, ezoKhenketho kunye noLawulo lokuPheka (eHong Kong SAR, China) kunye neDiploma kuLawulo lweehotele noKhenketho (eZambia).
Ukuba yingcali kwezokhenketho uGqirha Ngwira ukholelwa ekubeni ukhenketho lubaluleke kakhulu kuhlumo nakuphuhliso lwezentlalo, olunempembelelo ebalulekileyo ekunciphiseni ubuhlwempu, ukuveliswa kwengeniso, ukudalwa kwemisebenzi, utyalo-mali, uphuhliso lweziseko zophuhliso, kunye nokukhuthaza umanyano kwezentlalo. Ezokhenketho zinamandla okukhuthaza kunye nokwenza igalelo elibonakalayo kuphuhliso jikelele kwihlabathi.
Okwangoku, uGqirha Ngwira usekwe kwiNdlu yoZakuzo yaseZambia eParis, eFrance, esebenza njengoNobhala Wokuqala ophethe ezoKhenketho nanjengeGosa Lonxibelelwano laseZambia kwi-UNWTO.
Malunga nebhodi yezokhenketho yase-afrika
Eyasungulwa ngo-2018, iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika (i-ATB) ngumbutho owaziwa kwilizwe liphela ngokusebenza njengesixhobo sophuhliso loxanduva kwezokhenketho ukuya nokubuya kummandla wase-Afrika. IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika iyinxalenye ye- Umanyano lwaMazwe ngaMazwe lwaBalingani bamaKhenketho (ICTP).
Umbutho ubonelela ngenkxaso ehambelanayo, uphando olunengqiqo, kunye neziganeko ezintsha kumalungu alo.
Ngokubambisana namalungu abucala kunye namacandelo oluntu, i-ATB inyusa ukukhula okuzinzileyo, ixabiso, kunye nomgangatho wokuhamba nokhenketho ukuya, ukusuka, nase-Afrika. Umbutho ubonelela ngobunkokheli kunye neengcebiso kumntu ngamnye kunye nemibutho eyimibutho engamalungu. I-ATB iyawandisa ngokukhawuleza amathuba entengiso, ubudlelwane boluntu, utyalomali, uphawu, ukukhuthaza kunye nokuseka iimarike zerhwebo.
Ngolwazi oluthe kratya kwiBhodi yoKhenketho yaseAfrika, Cofa apha. Ukujoyina i-ATB, Cofa apha.